Deep uzo Ball agba, wiil wheel agba, Auto agba - emighị emi Yong
Ngwa nke iburu QYZC
QYZC Iburu jere ozi ụlọ ọrụ dị iche iche n'ụwa
Ngwaọrụ ngwa ọrụ igwe
Ngwongwo ihe eji egwuputa ihe
Industrylọ ọrụ ụgbọ oloko
QYZC na-ekwe nkwa ogo ngwaahịa na ọrụ kacha mma
Okwu Mmalite maka Iburu
Okwu Mmalite na-agba Deep uzo bọl agba: mabu dị ka otu n'usoro radial bọl agba, ọ bụ ndị kasị n'ọtụtụ ebe na Rolling agba. Ihe e ji mara ya bụ nkwụsi ike na esemokwu dị elu. Mgbe iburu naanị na-agba radial ibu, na kọntaktị n'akuku bụ efu. Mgbe miri uzo bọl agba nwere nnukwu radial nwechapụ, ọ nwere ihe arụmọrụ nke angular conta ...
Gịnị bụ miri uzo bọl agba?
Gịnị bụ miri uzo bọl agba? Ọbụghị bọọlụ niile bụ otu. A na-eme ụdị ụdị dị iche iche iji mezuo ihe achọrọ, yabụ ọ bụrụ na ị bụghị injinia ma ọ bụ soplaya (ọbụlagodi na ị na-eme oge ụfọdụ), ọ naghị adị mfe mgbe niile ịhọrọ nke kachasị mma maka mkpa gị. Were otu n'ime ụdị ndị a na - ejikarị - ụdị bọọlụ miri emi. Naanị n'ihi na ọ bụ ...
Ihe ndị na-emetụta ịgba agba ...
Olee ihe ndị na-emetụta ibu ibu? Nzube nke iburu ihe kwesịrị ekwesị bụ ime ka mgbanaka ahụ dị n'ime ma ọ bụ mgbanaka dị na mbara na-edozi ya na osisi ma ọ bụ shei, iji zere ihe ọjọọ ma ọ bụ ntụgharị ihu gburugburu na ibe ya. Kinddị mmịfe a na-adịghị mma (nke a na-akpọ creep) ga-eme ka kpo oku na-adịghị mma, iyi nke elu nke mating (nke ga-eme ka ígwè na-eyi ...
Isi ihe anọ maka nlebara anya na ...
Etu ị ga - esi họrọ akara aka na - ebu ụzọ Nke mbụ, debe ebe obibi ya na gburugburu ya ọcha Achọghị m ịgwa gị ihe na - eme. Ọbụna ma ọ bụrụ na ájá a na-adịghị ahụ anya na-abanye na HGF na-ebu ya, ọ ga-eyi akwa ahụ. Ikwu ya n'ezoghị ọnụ, ị gaghị ete ájá ọ bụla n'anya gị, nke bụ eziokwu! Nke abuo, ihe echichi kwesịrị ịkpachara anya ma zie ezi echichi Anyị agaghị ev ...
Njirimara na ngwa ...
Olee otú ịhọrọ nri agba Njirimara nke tapered ala biarin Tapered ala agba bụ a iche iche ụdị amị. Ihe mgbaaka dị n'ime na nke dị n'azụ ya nwere ọsọ ọsọ, ebe a na-agba gburugburu dị n'ụdị cone. The ala na raceway bụ na akara na kọntaktị, nke nwere ike ibu arọ radial na axial jikọtara ibu, na-nwekwara ike ibu dị ọcha axial ibu. Ibu c ...